Yaman: Haleellaa loltoota agarsiisarra jiranirra ga'eef warra Hutsiitu itti gaafatama - BBC News Afaan Oromoo
Yaman: Haleellaa loltoota agarsiisarra jiranirra ga'eef warra Hutsiitu itti gaafatama
Goodayyaa suuraa Loltoota haaraa agarsiisarra jiran, halleellaa dura
Haleellaa misaa'elii garee waraanaa Kibba Yamanitti agarsiisarra jiranirratti gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni shan ajjeefamaniiru.
Haleellaan kun kan qaqqabe dhuma ayyaana eebba loltoota humnoota warra Sekiwuriitii Beeltis jedhaman Yunaayitid Arab Imireetisiin deggeramaniirratti.
Gareen waraanaa haleelame kun magaalaa al-Dhalea kan leenji'an yoo ta'u dhaaba waraanaa humna cimaa qabudha jedhama.
Humni Sekiwuriitii Beelt kun qaama humna loltootaa mootummaa Yaman waliin ta'uudhaan finciltoota Huutsii waraanaa jiranidha.
Haleellaa garee waraanaa agarsiisarra jiran kanarra gaheef aanga'oonni warra Huutsii maqaa godhaniiru.
Gareen finciltootaa kun waa'ee haleellaa qaqqabee kanaa ilaalchisuun hanga yoonaatti yada hin kennine.
Gareen kun kanaan duras, haleellaa baayyee kan ammaa kanaan walfakkaatu humnoota Sekiwuritii Beeltirratti raawwate duuba turan jedhama.
Finciltootni Yaman masaraa fi buufata waraana mootummaa to'atan
Yeroo gareen loltootaa kun eeba irratti agarsiisarra turan haleellaa misaa'elii qaqqabeen namoonni sagal ammoo madaa'aniiru.
Yaman walitti bu'insa Bitootessa 2015 irraa eegalee biyyattii keessatti hammaateen rakkoo keessa jirti. Lola kanaanis warri Huutsii biyyattii garaa lixaa gara caalu to'annaa isaanii jala galfachuudhaan pirezedaantiin biyyatti Abdirabuuh Mansuur Hadii akka biyyaa baqatu taasisan.
Warri milishoota Huutsii ammoo Musiliimota Shi'aa keessatti humna kan qabdu Iraan irraa deggersa argatu jedhamee amanama.
Haala kana hubachuudhaan biyoonni Sawudii Arabiyaafi kanneen biroo sadeti gara caalaan isaanii biyyoota Arabaa Musiliimota Sunnii ta'an haleellaa qilleensaan duula jalqabuun mootummaa Hadii deebisanii bayyanachiisuu jalqaban.
Goodayyaa suuraa Misaa'eliin bakka rukkute
Gurmuun warra Hutisiirratti waraana bane kun deggersa meeshaafi oduu icciitii biyyoota US, UK fi Faransaayirraa argatu.
Waranaa kanaamn hagna ammaa namoonni kuma dhibba hedduutti lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u kan ajjeefaman hedduun isaanii Yamanootadha. Warra ajjeefaman kana keessaa ammoo sadii keessaa harki lama haleellaa humna qilleensaa Sauriitiin.
Waraana Yaman: Finciltoonni Huuttii Yaman, loltoota Saa'udii 'baayyee' booji'uu dubbatan